March 2019 - CeleLove
ရည်းစားကို ဓားနဲ့ထိုးပြီး “မသေပါနဲ့နော်” ဆိုပြီး ပွေ့ဖက်ငိုရှိုက်ကာတောင်းပန်နေတဲ့ ကောင်မလေး (ရုပ်သံ ကြည့်ရန်)
March 31, 2019 Cele Love 0
ရည်းစားကို ဓားနဲ့ထိုးပြီး “မသေပါနဲ့နော်” ဆိုပြီး ပွေ့ဖက်ငိုရှိုက်ကာတောင်းပန်နေတဲ့ ကောင်မလေး (ရုပ်သံ ကြည့်ရန်) လမ်းကြားတစ်နေရာမှာ ရည်းစားဖြစ်သူ အမျိုးသားရဲ့ ဗိုက်ကို ကိုယ်တိုင် အကြိမ်ကြိမ် ဓါးနဲ့ထိုးခဲ့ပြီးနောက် သွေးအလိမ်းလိမ်းဖြစ်နေစဉ်မှာ ပွေ့ထားပြီး “မသေပါနဲ့ဦး” လို့ တဖွဖွပြောပြီး နမ်းနေတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ရုပ်သံဟာ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့သလို […]
ဇနီးဖြစ်သူမှရင်ဘတ်ပေါ်တက်ခွပြီးကြိုးဖြင့်လည်ပင်းအား ရစ်ပတ်ကာ လမ်းဖြင့်ဆောင့်ခဲ့သောကြောင့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံး
March 30, 2019 Cele Love 0
ဇနီးဖြစ်သူမှရင်ဘတ်ပေါ်တက်ခွပြီးကြိုးဖြင့်လည်ပင်းအား ရစ်ပတ်ကာ လမ်းဖြင့်ဆောင့်ခဲ့သောကြောင့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံး ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်တွင်လင်မယားချင်းစကားများကြရာမှဇနီးဖြစ်သူမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား ရိုက်နှက်၍ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်..။ ဖြစ်စဉ်မှာမတ်၂၁ရက်နေ့နံနက်၎နာရီခွဲအချိန်ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့မရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေစဉ် အမှတ်(၅၄)ရပ်ကွက်၊လှော်ကားလမ်းပေါ်တွင်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရာ အဆိုပါလမ်းပေါ်တွင်စိုးသူအောင်(ခ)ကုလားကြီ်း(၃၅)နှစ်မှာ လဲကျသေဆုံးနေပြီး ဘေးတွင် ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ မခင်မျိုးကြည်(ခ)မခင်နှင်းအိအိပို(၃၂)နှစ်အားတွေ့ရှိမေးမြန်းရာ မခင်မျိုးကြည်(ခ) မခင်နှင်းအိအိပို မှ နေအိမ်သို့ပြန်လာစဉ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား နေအိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်တွင် […]
March 29, 2019 Cele Love 0
ဆံပင်ဖြူတွေဟာ အသက် ၃၀ ကျော်ရင် ပေါ်လာတတ်ကြပါပြီ။ အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူတွေပေါက်ရင်တော့ အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆံပင်ဖြူတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဆံပင်ဆေးဆိုးတာပါပဲ …. ။ ဒါပေမယ့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ဆံပင်ဖြူတွေက တစ်ဖန်ပြန်ပေါက်လာဦးမှာပါပဲ။ မယ်လနင်ဆိုတာ ဆိုးဆေးတစ်မျိူးဖြစ်ပြီး […]
လေးဖြူရဲ့ “စာမျက်နှာ ၁၅”သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် …. ။
March 27, 2019 Cele Love 0
လေးဖြူရဲ့ “စာမျက်နှာ ၁၅”သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် …. ။ လေးဖြူရဲ့ “စာမျက်နှာ ၁၅”သီချင်းက ဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေးထားတာလဲ ?? နိုင်ငံတကာ သတင်းစာများတွင် လူပျောက်ကြော်ငြာကို စာမျက်နှာ၁၅တွင် ဖော်ပြပါသည်။လေးဖြူရဲ့ “စာမျက်နှာ ၁၅” သီချင်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ ဝေးကွာနေသာ ချစ်သူကို မမြင်တာကြာပြီဖြစ်၍ “လူပျောက်ကြော်ငြာ” ထည့်ရလောက်အောင် […]
ဝါသနာကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီး မွေးရပ်မြေမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ကျော်မင်းဦးရဲ့ Video ဖိုင်လေး
March 25, 2019 Cele Love 0
ယူ၂၀ကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်ရအောင်ကွင်းလယ်ကနေအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေနဲ့ တိုက်စစ်ကိုပံ့ပို့ပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမားလေးဆိုတာနဲ့ကျော်မင်းဦးကိုပြေးမြင်မိမှာပါ။ယူ၂၀ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်းမလျော့သောလုံလတွေနဲ့အသင်းအတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကစားသမားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာလည်းချန်ပီယံဆုဖလားတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပ ရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ …. ။ ကျော်မင်းဦးရဲ့ဒူးဒဏ်ရာဟာ ကာလရှည်ကုသထားရတာပဲဖြစ်ပြီး ယင်းဒဏ်ရာကြောင့်ပင် အနားယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်မင်းဦးဟာ ဘန်ကောက်မြို့တွင် သူ့ရဲ့ဒူးဒဏ်ရာကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းက ကုသခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Police Tero အသင်းတွင် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော် […]
ချစ်သူတစ်ယောက်ကိုမှ အချစ်ကြီးချစ်မိနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခ
March 24, 2019 Cele Love 0
မိန်းကလေးတွေက အရမ်းချစ်မိပြီး ၊ တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ စွဲစွဲလမ်းလမ်းချစ်မိပြီဆိုရင် ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကြုံ့နေရတယ်။ ဒုက္ခဆိုတာထက် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်မိတော့ နေရာတကာ စိတ်ပူ၊ စိုးရိမ်နေတတ်လို့ အချစ်ဒုက္ခလိုမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် ချစ်သူတစ်ယောက်ကိုမှ အချစ်ကြီးချစ်မိနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော် ….. ။ (၁) စိတ်ပူတယ် ချစ်မိရင်လည်း […]
လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဘဲ (၃)လအတွင်း ပေါင်(၇၀)နီးပါး ၀ိတ်ချခဲ့တဲ့ အသက်(၅၀)အရွယ်အမျိုးသမီး
March 23, 2019 Cele Love 0
လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဘဲ (၃)လအတွင်း ပေါင်(၇၀)နီးပါး ၀ိတ်ချခဲ့တဲ့ အသက်(၅၀)အရွယ်အမျိုးသမီး သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့က အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ana Reyes ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် (၇၀)နီးပါးကို ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှမလုပ်ဘဲ ချပြခဲ့တဲ့အတွက် လူအများ တအံ့တသြဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမဟာ ကလေး(၂)ယောက် နဲ့ မြေး(၅)ယောက်ရှိတဲ့ အသက်(၅၀)အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။ သူမရဲ့ […]
ကရုဏာရှင် ဆေးကျောင်းသူလေးကို ကယ်ပေးကြပါဦးနော်
March 20, 2019 Cele Love 0
ဒီပို့လေးကို မြင်တွေ့ရသူတိုင်းက ကူညီသူများတွေ့မြင်နိုင်အောင် ၀ိုင်းရှယ်ပေးကြပါဦးနော်…… လူနာစောင့်မပါတဲ့လူနာအဘိုးတစ်ယောက်ကိုပြုစုရင်းရောဂါ ကူးခဲ့လို့ ဆေးအလုံး၅၀ထိုးရတော့မယ်ဆေးကျောင်းသူလေး သမီးလေးနာမည်ကဖူးဖူးမြတ်နိုးအသက်က၂၀ပဲရှိပါသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ တတိယနှစ်ဆေးကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။မကွေးဆေးရုံမှာ စာတွေ့လက်တွေ့ပညာသင်ကြားရင်း လူနာစောင့်မပါတဲ့ လူနာအဘိုးအိုကိုသနားလို့ပြုစုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် မှာလူနာအဘိုးအိုဆီကတီဘီရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး တီဘီပိုးေ ကြာင့်ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ရောဂါပိုးပါဝင်လာခဲ့ပြီး… မကွေးဆေးရုံတက်ခဲ့ပါတယ်။အခုမကွေးဆေးရုံကနေမန်းေ လးပြည်သူဆေးရုံကြီး၊ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောကုသဆောင် ကိုလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။ဆေးရုံကအခမဲ့ကုသပေးနေပေမယ့် Acyclovir ဆိုတဲ့ဆေးကဆေးရုံမှာခဏပြတ်နေလို့အပြင်က ဝယ်ရမှာပါ ထိုးဖို့ဆေးကအလုံး၅၀ထိုးရမှာကုန်ကျမှာကငါးသိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင်ဆိုတော့ လမ်းလုပ်သားတွေဖြစ် […]
March 2, 2019 Cele Love 0
ကင်ဆာ အဆင့်(၄) ဆေးရုံက (၆)လပဲ နေရတော့မယ်ဆိုသူ ယခုအကုန်ပျောက်ပြီဟု မှတ်လိုက်ပါပြီ အသဲကင်ဆာ အဆင့် ၄ ပေးပို့သူ…Saw Nandar ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၅ လပိုင်းမှာ အသဲကင်ဆာ ဖြစ်နေမှန်း စ သိရပါတယ် ။ စင်ကာပူမှာ အသားစ စစ်ဆေးပြီး အဆုတ်နဲ့ […]
သမီးရည်းစားနှစ်ဦး ရန်ဖြစ်ရာမိန်းခလေး၏ လက်ချက်ဖြင့်ကောင်လေး ဆေးရုံရောက်
March 1, 2019 Cele Love 0
ရန်ကုန်မြို့ တာမွေမြို့နယ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် အင်္ဂါနေ့က သမီးရည်းစားနှစ်ယောက် စကားများရန်ဖြစ်ကြရာ ကောင်မလေး၏ လက်ချက်ဖြင့် ကောင်လေးမူးမေ့လဲကျပြီး ဆေးရုံတင်ပို့ခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုကြီးနှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ပရဟိတအဖွဲ့ ၏ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းအရ တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ်ရှိ ဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ အရှေ့တွင် သမီးရည်းစား […]